HDD ​ရဲ့ bad sector ​ကို ​ဘယ်​လို Fixed ​ပြန်​လုပ်​မ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
HDD ​ရဲ့ bad sector ​ကို ​ဘယ်​လို Fixed ​ပြန်​လုပ်​မ​လဲ .
​အာ​ရှ​သား​လူ​လည်: ​ဘယ်​လောက်​ပျက်​နေ​တယ်​ဆို​တာ graphic ​လေး​နဲ့​ပြ​တဲ့ software ​ရှိ​လား .. ​ကူ​ညီ​ပါ​ကွာ..
HDD ​ရဲ့ bad sector ​ကို fixed ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက်​ဆို​ရင်​တော့
My computer ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ . ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး C:/ ​ကို right click ​နှိပ်​ပါ .
properties >> Tools ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ ..
Error-checking ​အ​ကွက်​က check Now ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ..
Automatically fix file system errors ​နှင့် Scan for and attempt recovery of bad sectors ​ရှိ​တဲ့​အ​ထဲ​က Scan for and attempt recovery of bad sectors ​ဆို​တာ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ် ​ပေး​လိုက်​ပြီး start ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ .. ​သူ့​ဟာ​သူ scan ​ဖတ်​ပြီး ​စစ်​ဆေး​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
4 ​ဆင့် ​စစ်​ပါ​လိမ့်​မယ် ​အဲ့​ဒါ​ပြီး​သွား​ရင် ok ​ပေး​လိုက်​ပါ . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် .
​ဒီ​မှာ​လဲ ​သွား​ဖတ်​ကြည့်​ပါ​ဦး . ​သူ​ရေး​ပေး​ထား​တာ​လေး​တွေ ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​မ​နက်​ကျ​မှ​ပဲ bad sector ​ကို fixed ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် software ​နဲ့ Defragment ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် software ​နှစ်​ခု​ကို ​တင်​ပေး​ပါ့​မယ် . ​အဲ့​လောက်​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​လောက်​ပါ​ပြီ . ​အ​သေး​စိတ်​ကို​တော့ ​နောက်​နေ့​မှ​ပဲ ​ကျွန်​တော် ​ဆက်​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ် ..